फिचर :: OnlineKhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview
Online Khabar Business मुख्य पृष्ठ
English बिजनेस होम
फिचर तारे होटलमा घोषित ५५ अर्ब लगानी अनिश्चित
२५ माघ, काठमाडौं । मुलुकमा लोकतन्त्र आएपछि उत्साहित बनेका लगानीकर्ता नयाँ संविधान बनेपछि लगानीको वातावरण बन्नेमा ढुक्क थिए । दश वर्ष लामो सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वमा खुम्चिएर बसेका लगानीकर्ताहरु शान्ति प्रकृयाको सुरुवातसँगै लगानी गर्न हौसिए...
२५ माघ, काठमाडौं । एक जमानामा कांग्रेसका नेताहरुले भन्ने गर्थे – ‘कुनै पनि व्यक्ति २५ वर्षको उमेरसम्म कम्युनिष्ट बन्छ, तर २५ कटेपछि ऊ कांग्रेसमा आउँछ ।’ तर, यतिबेला १३ औं महाधिवेशनमा होमिएको नेपाली कांग्रेसको...
मजदुरी भिसामा युएई आएका नेपाली तीन रेस्टुरेन्टका मालिक
अन्य नेपालीजस्तै पैसा कमाउने सपना बोकेर वेदप्रकाश पोखरेल युएई आइपुगे- सन् २००३ मा । स्याङ्जा ओरस्टे-७ का पोखरेलले गाउँकै विद्यालयबाट प्रवेशिका गरे । ‘बाबुआमाको चाहना त धेरै पढोस् भन्ने नै थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘जेठो...
यो मन्दिर ३८ सय मिटर उचाईमा...
‘अप्रेसन क्वाक’मा समातिए १२ नक्कली डाक्टर
२३ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सीआर्इबी)ले हातमा हत्कडी लाइएका १२ जना अभियुत्तहरु सार्वजनिक गर्‍यो ।
उनीहरु पेशाले डाक्टरहरु थिए, तर नक्कली प्रमाणपत्रधारी । पक्राउ परेका 'डाक्टरहरु'को एसएलसी र प्रविणता प्रमाण पत्र...
बंगलादेशसित जित्दाजित्दै हार्‍यो नेपाल
चिरञ्जीवी पौडेल २२ माघ, काठमाडौं । आयोजक बंगलादेशसित क्वार्टरफाइनलमा पराजित भएर नेपाली यु-१९ क्रिकेट टोली विश्वकपबाट बाहिरिएको छ । यद्यपि, नेपाली युवाले यस विश्वकपमा साहसिक प्रदर्शनका साथ आफ्नो छाप छोड्न सफल भएका छन् ।...
हावाबाट बिजुलीः जलविद्युतभन्दा दोब्बर महँगो
२२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गरेपछि उनलाई निकै उडाइयो । प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नेहरुले भने हावाबाट विजुली असम्भव नभएको भन्दै एकाध ठाउामा भइसकेको प्रयोगलाई औंल्याए...
कृषिमन्त्रीको मनको बहः मान्छेहरु निर्दयी हुँदारहेछन् !
२१ माघ, काठमाडौं । नागरिकहरुले सरकारसँग दुखेसो पोख्नु त स्वाभाविकै हो । तर, अन्तरवार्ता लिनका लागि मन्त्रालयमा पुगेका अनलाइनखबरकर्मीसँग कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले आफ्नो मनको वह पोखे । जनताले मन्त्रीको दुःख नबुझेको र एकोहोरो काम...
हिन्दू धर्मावलम्बी सबैभन्दा खुसी: अध्ययन
२१ माघ, एजेन्सी । बेलायतमा गरिएको एक अध्ययनले त्यहाँका हिन्दू धर्मावलम्बी अरुभन्दा हाँसीखुसी रहने गरेको देखाएको छ । सोही अध्ययनले धार्मिक आस्था भएकाभन्दा नभएका कम खुसी हुने पनि देखाएको छ । बेलायतको राष्ट्रिय तथ्यांक...
कांग्रेस महाधिवेशनः यसपालि ‘मुडमा’ छन् रामचन्द्र
२१ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाको अगुवाईमा कांग्रेसबाट फुटेको समूहले ८ असार ०५९ मा नयाँ बानेश्वरमा ‘प्रजातान्त्रिक कांग्रेस’ पार्टी घोषणाको तयारी गरिरहेको थियो । ६ गतेदेखि सुरु भएको भेलाको अन्तिम दिन बिहान ९ बजे...
गणतन्त्रका लागि लडेर ढाडै खुस्कियो, अब के गर्ने ?
‘मेरा दुःख धेरै छन् । आफैं दिशा-पिसाब गर्न सक्दिनँ । युरिन ब्याग र पाइपको प्रयोग गर्नुपर्छ । पीडा कम गर्न नियमित रूपमा महँगो औषधि खाइरहनुपरेको छ । उपचार खर्च कसरी जुटाउने ? छोरीको लालनपालन...
घर-घरमा ग्यास जोड्ने हो ? हेर्नुहोस् टेकुको ग्यास स्टेशन !
२० माघ, काठमाडौं । घाँसैघाँसले भरिएको काठमाडौंको टेकुस्थित प्राकृतिक ग्यास स्टेशनमा फेरि चहल-पहल सुरु भएको छ । २० वर्ष बन्द रहँदा घाँस र बुट्यानको झाडीले घेरिएको 'ग्यास स्टेशन' घाँस स्टेशनजस्तो देखिएको थियो । अब...
तारे होटलमा ग्यास र तेलको अभाव हुन नदिने प्रयास गरिरहेका छौं
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार सरकारले अहिले तारे होटलहरुमा तेल र ग्यासको अभाव हुन नदिने प्रयत्न...